के तपाइको सुत्नेबेला यसरि मोबाइल चलाउने बानि छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो समस्या - Himali Patrika
के तपाइको सुत्नेबेला यसरि मोबाइल चलाउने बानि छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो समस्या
हिमाली पत्रिका ५ माघ २०७६, 5:09 pm
काठमाडौं । मोबाइल फोन हाम्रो जीवनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको यथार्थ हो। हामी मोबाइल फोन विना एकदिन पनि समय वेतित गर्न सक्दैनौं। हामीले दिनहुँ गर्ने हरेक क्रियाकलाप मोबाइल फोन र इन्टरनेटसंग सम्बन्धित छन्। आजभोलिका आधुनिक स्मार्टफोनले त झन् हाम्रो दैनिकीलाइ नै सहझ तुल्याईदिएका छन्। हामीलाइ अध्याधिक मोबाइल फोनको प्रयोग गर्ने बानि बसिसकेको छ।
मोबाइल फोन विशेष त फुर्सदको समय सुत्नेवेलामा धेरै मोबाइल चलाउनु स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्तै नकारात्मक मानिने विभिन्न तथ्यहरुले देखाएको छ। अन्यसमय को तुलनामा सुत्नेबेला मोबाइल फोन चलाउँदा हुने नकारात्मक प्रभावहरु यस्ता छन्।